> Resource > Ladnaansho > EMTEC Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Device EMTEC Kaydinta
Waxaan ka EMTEC Flash Drive soo kaban karto, Files?
Hi, Wax dhibaato ah oo aan haatan ma xallin karo. Waxaan loo baahan yahay qaar ka mid ah meel bannaan oo dheeraad ah oo waxaan formatted aan 8GB EMTEC flash drive la files video iyo sawiro si qalad ah. Waxaan dareemayaa sida inaan ahay doqon ah oo haatan sababtoo ah waxaan leeyihiin qaar ka mid clips qoyska aad u qaali ah, iyo sawiro ku yaal. Su'aashaydu waa mid fudud: Waxaan u raadinayaan software ugu kalsoonaan karo inuu ka soo kabsado files aan video iyo sawiro. Wax macno ah ma u baahan tahay in software free. Mahadsanidin.
Ha argagixin! The videos formatted iyo sawiro, oo waxaa la qorayaa xogta sida geli karin nidaamka, ayaa weli ku jira aad EMTEC flash drive. Waxay la waayay doonaa si joogto ah oo keliya marka ay overwritten by xog cusub oo ku saabsan flash drive. Sidaas darteed, waxaad joojin kartaa adiga oo isticmaaleya isticmaale EMTEC flash drive iyo aad u hesho EMTEC kabashada xog lagu kalsoonaan karo flash drive ee Internet-ka ee caawimo sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo.
Halkan waa talo aad u: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani waxay awood leh EMTEC utility kabashada xogta flash drive ka caawisaa in aad ka bogsato xogta laga badiyay ka EMTEC flash drive u tirtirka, formatting, nidaamka ama weerar virus baadi. Waa in la soo celiyo dhammaan noocyada file ka EMTEC flash drive, sida sawiro, files audio, videos, waraaqaha, iwm awood ka sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada dhammaan qalabka lagu kaydiyo EMTEC, oo ay ku jiraan USB flash drive, drive adag iyo kaararka xusuusta.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka EMTEC flash drive hadda!
Qabtaan EMTEC Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Hadda waxaan ku tusi doonaa sida inuu ka soo kabsado xogta ka EMTEC flash drive la Windows version of Wondershare Data Recovery.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xogta EMTEC
Inuu ka soo kabsado tirtiray, lumay, la kharribtay ama formatted xogta ka EMTEC flash drive, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode ka dib markii rakibidda iyo bilaabay barnaamijka on your computer.
Tallaabada 2 baarista EMTEC flash drive
Markaas waxaad dooran kartaa in aad EMTEC flash drive, taas oo lagu baari doono oo ku qoran furmo, oo guji "Start" si ay u bilaabaan baar files lumay it on.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in EMTEC flash drive waxaa laga garan karaa your computer sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho Faylal ay ka EMTEC Flash Drive
Marka iskaanka la dhammeeyo, helay files aad EMTEC flash drive lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" iyo qaybaha "Jidka". Waxaad ka eegi kartaa magacyada file si ay u arkaan in files badiyay lagu soo kabsaday kartaa EMTEC flash drive ama aan.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan aad files lumay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin your computer badbaadiyo.
Sida loo Unformat Memory Card
3 Talaabada inay Qabtaan DataTraveler Recovery